Hargaysa: Dhalinyaro weeraray guriga musharaxa Waddani - BBC News Somali
Hargaysa: Dhalinyaro weeraray guriga musharaxa Waddani
Image caption Murashaxa madaxweynaha ee xisbiga mucaaradka ee waddani Cabdiraxman Maxamed Cabdillahi Ciro .
Iyada oo ay in ka yar mudo bil ahi ka hadhsantahay doorashada madaxtinimada ee Jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbannaanida ee Somaliland ayaa waxaa xalay la weeraray hoyga uu magaalada Hargeysa ka deganyahay murashaxa madaxweynaha ee xisbiga mucaaradka ah ee Waddani, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillahi Cirro.
Gudoomiyaha ku meel gaadhka ah ee xisbiga Waddani, Cabdilqaadir Ismaaciil Jirde, ayaa BBC-da u sheegay in koox dhallinyaro ahi ay xalay soo weerareen guriga Cabdiraxman Cirro shiideen.
Cabdilqaadir ayaa waxa kale oo uu sheegay in dhallinyaradaasi ay ku tuhmayaan in ay soo abaabuleen cidda tartanka doorashada ka dhexeeyo, wuxuuna intaa ku daray in dhalinyaradaasi dhagax ku dhufteen oo dhaawaceen askari ka mid ah ilaalada guriga.
Taliyaha guud ee ciidammada boliiska Somaliland Jeneraal Cabdillahi Fadal Iimaan oo BBC-da la hadlay ayaa sheegay in falkaa loo qabtay afar dhallinyaro ah iyo baabuur, haatanna ay wadaan baadhitaan, wuxuuna ugu baaqay xisbiyada in ay xakameeyaan taageerayaashooda gaar ahaan dhallinyarada, isagoo intaa raaciyay in boolisku ay gacan bir ah ku qaban doonaan cid kasta oo ku kacda fal noocaas oo kale ah.
Jeneraal Cabdillahi Fadal Iimaan ayaa sida oo kale sheegay in isla xalay ay qabteen dhallinyaro weerartay xafiis xisbiga Kulmiye uu ku leeyahay xaafadda Sheekh Madar ee magaalada Hargeysa.
Dhica kalena, murashaxa madaxweyne ee xisbiga Kulmiye, Muuse Biixi Cabdi, ayaa si adag u cambaareeyay falkaa kooxda dhallinyarada ahi xalay dhagaxaanta ku weerareen guriga murashaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaridka ah ee Waddani ka deganyahay magaalada Hargeysa .
Muuse Biixi oo maanta taageerayaashiisa kula hadlayey fagaaraha Khayriyada ee Boorama wuxuu ku tilmaamay falkaasi mid badawnimo ah.
Guud ahaan magaalooyinka Somaliland waxaa dhawrkii maalmood ee la soo dhaafay ka socday ololaha siyaasada ee xisbiyada ku loolamaya doorashada lagu wado in ay Somalialnd ka dhacdo 13-ka bisha Novembar.